वास्तविकता वा नक्कली समाचार: कसरी खबरहरू झूटा वा सत्य छन् भनेर कसरी जान्ने 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
वास्तविकता वा नक्कली समाचार: कसरी थाहा पाउने कि कसरी एक समाचार गलत छ वा सत्य हो
कसरी थाहा पाउने कि यदि तपाईंले व्हाट्सएपमा प्राप्त गर्नुभयो वा फेसबुकमा हेर्नुभएको लिंक नक्कली समाचार हो? जे होस् नक्कली समाचार नयाँ होइन, नक्कली समाचार भन्ने शब्द हालका वर्षहरूमा लोकप्रिय भएको छ। यो सामाजिक मिडिया र कुराकानी अनुप्रयोगहरू मार्फत वेबसाइट सामग्री, फोटो र भिडियो साझेदारी को सहजताको कारण हो।
अक्सर समय, शंकास्पद सामग्री सहितका विषयहरू प्रसारण गरिन्छ मानिसहरू तिनीहरूको सत्यताको पुष्टि बिना। र, प्रतिलिपि बनाइए पछि, तिनीहरूलाई वास्तविक रूपमा क्रेडिट गरिन्छ, यदि ती छैनन् भने पनि। मद्दतको लागि, हामीले सुझावहरू र वेबसाइटहरू एक साथ राख्यौं तपाईंलाई एक कथा गलत छ वा छैन भनेर पहिचान गर्न मद्दतको लागि।
१. समाचार पढ्नुहोस्
धेरै जसो नक्कली समाचारहरू यसको आकर्षक हेडलाइन्सका कारण धन्यवाद हुन्छन्, जसले पाठकको ध्यान खिच्छ। यसले धेरै व्यक्तिले लि saying्क साझेदारी गर्न समाचार पनि के भनिरहेछ भनेर पढ्नु बिना नै साझेदारी गर्दछ। तसर्थ, एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश भनेको कम्तिमा थोरै सामग्री पढ्नु हो, यदि तपाईं यसलाई प्रसारण गर्न चाहानुहुन्छ भने निर्णय गर्नु अघि।
नक्कली समाचार फैलाउनमा विशेषज्ञता दिने फ्याक्टचेक.अर्ग साइटले जायज रिपोर्टमा शीर्षक सधैं सम्झन्छ र लेखलाई सँधै अनुवाद नगरीकन पनि झूटा अपेक्षाहरू पैदा गर्न सक्दछ।
२. लेखकलाई अनुसन्धान गर्नुहोस्
गम्भीर मिडियामा प्राय: लेखकहरूले हस्ताक्षर गरेका लेखहरू हुन्छन्। यदि शंकास्पद लेखमा हस्ताक्षर छ, छोटो खोजी गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि लेखकले अन्य रिपोर्टहरू लेखेका छन् कि छैनन्।
होशियार रहनुहोस् यदि व्यक्तिको वर्णन अति प्रभावशाली छ। यो पनि रातो फ्ल्याग हुन सक्छ यदि तपाइँको सम्पर्कहरुमा एक कर्पोरेट ईमेल छैन, तर बरु जेनेरिक, जस्तै @ gmail.com o @ आउटलुक। com.
Attention. URL मा ध्यान दिनुहोस्
शंकास्पद विवरणहरूको लागि वेबसाइट ठेगाना जाँच गर्नुहोस् यो वैध विश्वसनीयता पृष्ठ जस्तो देखिनका लागि। एक उदाहरण abcnews.com.co हो, जसले abcnews.com लाई प्रतिरूपण गर्न खोज्छ।
विवरण सजिलै हराउन सक्ने बिचमा हराउन सकिन्छ। पाठकहरूलाई भ्रममा पार्न, पृष्ठले मूल संचार वाहनको लोगो पनि समावेश गर्दछ।
A. एक महत्वपूर्ण आँखा छ
सुरक्षा कम्पनी अविराको वेबसाइटले नोट गर्‍यो कि नक्कली समाचार प्राय: समाचार भन्दा बढी वास्तविक देखिने बनाइन्छ। एकै साथ उनीहरूले प्रभाव पार्ने वा भावनात्मक पक्षमा अपील गरेर पाठकलाई मोहित पार्ने प्रयास गर्दछन्।
त्यसोभए तपाईले जे पढ्नु भएको छ त्यसमा जानु भन्दा पहिले तपाईले केहि प्रश्न सोध्नु महत्वपूर्ण छ। उदाहरण को लागी: किन त्यो सामग्री लेखिएको थियो वा त्यहाँ अन्य साइटहरु उस्तै रिपोर्ट गर्दै थियो?
यदि आधिकारिक स्रोतहरू वा तथ्या c्कहरू उद्धृत गरियो, निश्चित गर्न खोजी गर्नुहोस्। एउटा साधारण गुगल खोजीको परिणाम आश्चर्यजनक हुन सक्छ।
Quality. गुणस्तरको मामला
गलत हिज्जे पाठ नक्कली समाचारको चेतावनी संकेत हुन सक्छ। हिज्जे वा typos को लागी जाँच गर्नुहोस्। ठूला अक्षर र नाटकीय विराम चिह्न, अण्डाकार र उद्गार विन्दुहरूले भरिएका, मान्यता प्राप्त मिडियामा पनि सामान्य छैन।
The. प्रकाशन मिति जाँच गर्नुहोस्
के तपाईंले माथिका सबै जाँच गर्नुभयो र शंकास्पद केहि पनि देख्नुभएन? समाचार सत्य हुन सक्छ, तर यो केही महिना वा वर्ष पहिले सिर्जना गरिएको थियो। सन्दर्भबाट बाहिर निकालेको विषयले फरक पार्छ।
The. छविहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्
समाचार मात्र गलत हुन सक्छ, तर छविहरू पनि। र ती सम्पादन अनुप्रयोगहरूको समयमा सामान्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन कोहीले पनि फोटोहरू परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्।
त्यसकारण विवरणहरूमा ध्यान दिनुहोस्, जस्तै अनौंठो छाया र किनारहरू, वा विकृत तत्त्वहरू, जस्तै क्षितिज वा भित्ते। एउटा टिप भनेको गुगलमा रिभर्स खोजी गर्नु हो, जहाँ तपाईं मूल संस्करण फेला पार्न सक्नुहुनेछ, यदि यो आरोहण गरिएको फोटो हो भने।
र त्यो सबै होइन। को अनुप्रयोगहरु गहिराइ तिनीहरू भिडियोहरू सिर्जना गर्न सक्षम छन् जसमा उनीहरूले बोल्ने र अभिनय गर्ने मानिसहरूलाई नक्कल गर्छन्, प्रायः जसरी तिनीहरूले कहिल्यै गर्दैनन्। जब टेक्नोलोजीको विकास हुन्छ, यो अझ यथार्थपरक हुन्छ र सामग्री वास्तविक रूपमा भइरहन्छ।
तपाईं यस भिडियोमा ओबामाले के भन्छन् विश्वास गर्नुहुन्न! 😉
त्यस्ता अवस्थाहरूमा, तपाईंले विवरणहरूमा ध्यान दिन आवश्यक पर्दछ, जस्तै आँखा अस्वाभाविक पलक, ओठको चाल, वा गलत ठाउँमा छायाको उपस्थिति। समाचारको रूपमा, प्राप्त भिडियोको स्रोत पहिचान गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि यो वास्तवमै विश्वसनीय छ कि छैन।
The. मद्दतको लागि विशेषज्ञहरूलाई सोध्नुहोस्
त्यहाँ धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटहरू छन् जुन गलत समाचार फैलाउनमा माहिर छन्। सँगैका, यी उपकरणहरूले गलत सूचनाको बिरूद्ध लडाईमा काम गर्दछन् र शंकास्पद समाचार अनुसन्धान गरियो जुन भाइरल भएको छ। मुख्यहरू तल सूचीबद्ध छन्:
लुपा एजेन्सी (Piauí पत्रिका)
वास्तविकता वा असत्य (G1)
गुगल डाटा सत्यापन एक्सप्लोरर
जान्नुहोस् कसरी स्प्याम रिपोर्ट गर्ने र WhatsApp मा नक्कली समाचारबाट आफूलाई जोगाउनुहोस्
समाचारहरू पढ्न र राम्रोसँग सूचित राख्न अनुप्रयोगहरू
व्हाट्सएप: कसरी थाहा पाउने कि म क्लोन गरिएको छ र यसलाई के गर्नु पर्ने हो
टिभीमा फेसबुक भिडियोहरू कसरी हेर्ने